Vanhu Kuverenga Makamera Vagadziri & Vatengesi - China Vanhu Kuverenga Camera Fekitori
Iyi ndiyo yekuverenga vanhu vazhinji inoshandisa AI tekinoroji kuongorora nzvimbo hombe, Mazhinji emakomputa edu eCrowd zvigadzirwa zvepamutemo. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kutaurirana nevashandi vedu vekutengesa kuti vakutumire ruzivo rwakadzama nezve yedu Crowd counter. HPC198 AI kuwanda kwevanhu kuverenga system inotora inotungamira AI yekuona algorithm, ine 3D calibration basa, iyo inogona kuvandudza zvakanyanya kuverenga kurongeka nekumhanyisa, yakavakirwa-mukati AI algorithm kumberi-kumagumo isina kunyorwa vis ...
HPC199 AI Vehicle counter imotokari kuverenga iyo inoverenga inouya uye inobuda mota. Inogona zvakare kushandiswa kuverenga zvimwe zvinhu kana kushandiswa kune vanhu kuverenga. Mazhinji emakesi edu eMota zvigadzirwa zvepamutemo. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kutaura nevashandi vedu vekutengesa kuti vakutumire rumwe ruzivo rwakadzama nezve yedu Yemota counter. HPC199 AI Vehicle counter ine yakavakirwa-mukati AI yekugadzirisa chip, iyo inogona kuzvimiririra kupedzisa tarisiro ...
Mazhinji emusoro wedu wekuverenga kamera michina yezvigadzirwa. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kutaura nevashandi vedu vekutengesa kuti vakutumire rumwe ruzivo rwakadzama nezve edu ekuverenga makamera. Iyo HPC010 musoro wekuverenga kamera inoshandisa inozvigadzira yega-kamera yakadzika algorithm modhi kuti ishandise kuona muchinjikwa-chikamu, kukwirira uye kufamba kwekufamba kwechinangwa, nokudaro kuwana yakakwira-chaiyo chaiyo-yenguva-yenguva yekufamba kwevanofamba data, uye yakavakirwa-muHuawei ...
Iyi inzvimbo ye3D vanhu, inova yepamberi 3D vanhu vanoverenga Machine pamusika, uye zvakare inopa Yekugara kudzora basa, Vazhinji vedu Vanhu kuverenga masisitimu zvigadzirwa zvine patent. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kutaurirana nevashandi vedu vekutengesa kuti vakutumire rumwe ruzivo rwakadzama nezve yedu Kuverenga system. HPC009 vanhu vanoverenga system vanoshandisa yakazvigadzira-mbiri-kamera kudzika algorithm modhi kuti ishandise kuona ...
Iyi People kuverenga kamera ndiyo yedu nyeredzi chigadzirwa. Iyo yakaiswa paShanghai Pudong International Airport. Yakabvunzurudzwawo neShanghai TV ndokurumbidzwa setekinoroji nhema, heino vhidhiyo renhau: Vazhinji veVanhu vedu kuverenga kamera zvigadzirwa zvepamutemo. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kutaurirana nevashandi vedu vekutengesa kuti vakutumire rumwe ruzivo rwakadzama nezve yedu Vanhu kuverenga kamera. HPC008 Vanhu vanoverenga kamera yakafanana ne ...